Ballan-jab | HIGIL
Posted on Axad, Agoosto 19, 2012 by Jidhidhico	Faallo u dhaaf
Bare cusub ayaa dhawr maalmood maaddada Fiisigiska ka dhigay dugsiga sare ee _________. Waxa uuna noqday baraha kaliya ee dugsiga, kaas oo ay barteyaalka wax-ka-dhigtay aad u jeclaysteen wax-dhigistiisa—wali ba furfuristiisa hufan ee maaddada Fiisigiska—iyo warcelimihiisa diirran, ee fahmada barteyaalkiisa kobciyey.
Barihii waxaa loo wareejiyey dugsi kale oo ku yaalla goballada mid—oo ay badan tahay in ay __________ ahayd. Taas ka dib, barteyaalkii waxa ay isugu soo baxeen muddaharaad. Waxay dalbadeen in looga warramo sababaha barihii la jeclaa looga baddalay dugsiga. Hadalladooda qayaxan ayaa misana qaar habaarro qaba si kale u qallibeen—arrintii ba waxay isu baddashay _________ iyo _________. “Maamulka _________aad yuusan na cadaadinin,” iyo weedho kale oo la mid ah ayaa la isla dhex meeray; waxayna xambaarsanaayeen dhiillo laab-la-kaceed. Fadqalaladaas baa waxaa ka dhashay taxaabis ay ciidanka amniga, oo dugsiga sakadda soojeedkiisa ah ka soo dareeray, barteyaal tobaneeyo ah xir-xiraan.
Waxaas oo dhan waa wax na looga sheekeeyaye, annaga xiisaddii Ingiriiska ayaannu bartanka kaga jirnay. Waxaan se ku rumaysannay, oonnu ogayn askarigii noo soo galay markii dhibkaasu socday ee nagu la dardaarmay, “Hooy, qof habeen far taagay ba waxaa loo baxshay Fartaag e, ha is muujininna!” Qaaddannay.
Maalmo ka dib baa waxaa soo baxday sheeko kale. Waa sheeko dhex martay barte xabsiga galay iyo qof uu jeclaa, oo ay arrintii bannaanbaxu kala fogayn gaartay. Sidii la warshay, markii ay labadu indhaha iska qaadeen ayaa waxay isku bariidsheen:
Ma bur buu
Na ye “Baxa”
Way ba kane!
Bal sheekadaas ka buuxi meelaha bannaan, waa dhab iyo dhalanteed la isku laaqay e!
Previous post ← Sheeko Gaaban: Talasan
Next post Ducaadda Maanta Doorkooda →